Football Khabar » कोपा अमेरिका : उपाधिका लागि आज ब्राजिल र पेरू भिड्दै !
कोपा अमेरिका : उपाधिका लागि आज ब्राजिल र पेरू भिड्दै !
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा आज उपाधि भिडन्त हुँदैछ । ४६औं संस्करणको उपाधिका लागि घरेलु टोली ब्राजिल र पाहुना टोली पेरू आमनेसामने हुँदैछन् । खेल नेपाली समयअनुसार आज राति ठीक १ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आफ्नो भूमिमा खेलिरहेको ब्राजिल आज पेरूलाई हराएर उपाधि पोल्टामा पार्ने दाउमा छ । सन् २००७ यता यो प्रतियोगिता जित्न नसकेको ऊ यसपटक आफ्नै भूमिमा उपाधि उचाल्न चाहन्छ । जारी प्रतियोगितामा उत्कृष्ट लयमा देखिएको ब्राजिललाई पेरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा बलियो टोली मानिएको छ ।
यता, पेरू भने आज ब्राजिललाई उसकै घरमा हराएर उपाधि चुम्ने दाउमा छ । सेमिफाइनलमा चिलीविरुद्ध ३–० को शानदार जित निकालेर फाइनल पुगेको उसले ब्राजिलसँग समूह चरणमा भोगेको हारको बदला लिने मौका छ । यसअघि समूह चरणमा पेरूलाई ब्राजिलले ५–० को लज्जास्पद हार चखाएको थियो । समूह चरणमा ब्राजिलसँग यस्तो फराकिलो हार भोगेको पेरू उपाधिका लागि त्यही ब्राजिलसँग खेल्ने हुँदा खेल थप मत्त्वपूर्ण हुने नै छ ।
‘हेड टु हेड’मा ब्राजिल र पेरू
दक्षिण अकेरिकी क्षेत्रका ब्राजिल र पेरूमा तुलनात्मक रूपमा ब्राजिल हाबी देखिन्छ । यी दुई टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हालसम्म कूल ४५ पटक एकअर्काविरद्ध खेलेका छन् । जसमा ब्राजिलले बढी नतिजा आफ्नो पक्षमा निकालेको छ । तथ्यांक हेरौं ।
कूल खेल – ४५
ब्राजिल विजयी – ३२
पेरू विजयी – ४
बराबरी – ९
२२ जुन २०१९ – ब्राजिल ५ – ० पेरू
१५ नोभेम्बर २०१६ – ब्राजिल २– ० पेरू
१२ जुन २०१६ – ब्राजिल ० – १ पेरू
१७ नोभेम्बर २०१५ – ब्राजिल ३ – ० पेरू
१४ जुन २०१५ – ब्राजिल २ – १ पेरू
प्रकाशित मिति २२ असार २०७६, आईतवार ०८:५०